Tizen 3.0 na-amalite ịbata na Samsung Gear S3 | Androidsis
Tizen 3.0 malitere iru na Samsung Gear S3
Ebe Samsung kwụsịrị ikpo okwu gam akporo Wear kpamkpam, ụdị Samsung aghọọla ezigbo nhọrọ n'ahịa, nke nyere ya ohere bụrụ onye nrụpụta nke abụọ nwere smartwatches kacha na -ere n'ụwa niile, n'azụ Apple.
Kemgbe ụdị nke mbụ, Tizen na -enye na Gear S nnwere onwe na arụmọrụ ka ukwuu na ruo ugbu a, na taa, adịghị na ikpo okwu Google Android Wear. N'ezie, ikpo okwu mkpanaka Google abụrụla naanị nhọrọ maka ndị nrụpụta isi na enweghị nhọrọ ndị ọzọ n'ahịa.
Mmelite a, nke Tizen rute ụdị 3.0 nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 260 MB ma na -ewetara anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụrụ, n'etiti nke ọ pụtara. ọnọdụ nchekwa ike nke ahụ na -egosi anyị oge, yana nke ndụ batrị nwere ike iru ụbọchị iri anọ. Ọnọdụ ịchekwa ike ụdị a enweghị isi, ebe ọ bụrụ na ị nwere elekere mara mma, ịchọrọ iji ya mee ihe nke ọma.
Ozi ndị ọzọ na mmelite ọhụrụ a nke Gear S3 na -enye anyị, metụtara ụzọ mee nha, Iji dokwuo anya, otu n'ime ntụpọ enwere ike ịpụta na ụdị Samsung a, n'agbanyeghị na ọ pụtaghị na ha ezughi oke. Ọ na -enyekwa anyị ohere iji ụdaolu site na ama anyị wee daa ụda na Gear S3 anyị oge ọ bụla anyị nwetara oku.
Enwekwara ike ijikọ na Bixby, n'agbanyeghị na ugbu a ọ ka bụ onye enyemaka pere mpe n'ihi na ọ dị naanị na Bekee na Korean, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ kwuru, n'oge na -adịghị anya ọ kwesịrị ịmalite ịgafe ihe ịga nke ọma nke asụsụ ndị ọzọ dị ka Spanish, French na German.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Tizen 3.0 malitere iru na Samsung Gear S3
Ọmarịcha edemede, daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta ya!
N'oge m na -agbalị kemgbe ụnyaahụ ka m gụrụ ya mana mmelite ahụ apụtabeghị na ekwentị ma ọ bụ na nche, ka ị na -eche
Ihe nlereanya m bụ SM -R760 na azụtara m smartwatch n'oge na -adịbeghị anya echere m na ụdị ahụ ga -adị ozugbo m nwere ya mana ọ dị nwute na ọ napụbeghị m: - /
30 ụbọchị nke egwu efu na Amazon Music Unlimited na 10 Euro iji nọrọ na Amazon ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Prime
A ga-akwụsị OnePlus 5 na ihu ọma nke OnePlus 5T